HGH Singapore - Ebee ka ịzụta Hormone Hormone na Singapore?
Site HGH Thailand Nwere ike 30, 2018
1. Ebee ka m nwere ike ịzụta HGH ma ọ bụ Human Growth Seller supplier na Singapore
2. Ihe kacha mma HGH na Singapore
2.1 Kwenye na oke elu nke hormone nke mmadụ
2.2 Enweghị ike iji HGH Genotropin pen
2.3 Mfe nchekwa
2.4 Soro HGH na ụgbọ elu ma na ọdụ ụgbọ elu
3. Kedu ihe bụ HGH (Somatropin)?
3.1 Jiri HGH na egwuregwu
3.2 Ọgwụgwọ ikpere na enyemaka nke hormone growth
3.3 HGH na Bodybuilding
3.4 Kedu ka hormone nke na-eto eto na-esi eme ọganihu?
3.5 Ọgwụgwọ oke ibu na ọnwụ
3.6 Ngwọta nke nwoke ahụ meworo agadi na-eto eto na Singapore
4. Mmetụta dị na hormone growth
5. Ụdị nke HGH
6. HGH ego na Singapore na ụzọ ịkwụ ụgwọ
6.1 Ndenye ọnwa maka uto eto na Singapore
HGH na-ebu ọla na Singapore
HGH Thailand ahịa ọgwụ bụ otu n'ime ndị na-ahụ maka ọgwụ ndị na-ahụ maka ọgwụ ndị na-eto eto na-akwado ndị ahịa na mkpa nke somatropin n'ụwa nile tinyere ndị ọrịa anyị si na Singapore. Ngwakọta nile nke homone zuru oke bụ iwu zuru oke ma na Thailand ma na Singapore, nwere akara asambodo na ikikere.
Ndị ọrịa si Singapore nwere ike ịjụ ma nweta ọgwụ ọjọọ na Bangkok ma na ọfịs anyị na site na nzipu ozi na ịhapụ ndị ọkachamara anyị na adreesị gị nke ga-egosi gị obiọma HGH injections, ị nwekwara ike ịnye otu nnyefe ntanetị nke na-eto eto na Singapore site na Thailand ruo n'ọnụ ụzọ ụlọ gị, nyocha nile, ndụmọdụ maka ịme ihe na usoro ịzụta ọgwụ na ịkwụ ụgwọ nwere ike ịntanetị n'enweghị ịhapụ ụlọ.
Ụlọ ahịa ọgwụ anyị na-ewere ọrụ nile nke na-eme ka e jide n'aka na nnweta nke hormone na-eto eto na Singapore, ịkwụsị omenala na nnyefe nnyefe.
Kedu ihe kacha mma HGH na Singapore?
Dị ka ndị ahịa anyị si n'akụkụ ụwa nile, tinyere ndị ọrịa sitere na Singapore, ihe kachasị mma n'ahụ mmadụ bụ hormone bụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ Pfizer - Genotropin GoQuick Pen 12mg (36IU) nke àgwà Europe nke mepụtara na Belgium nke anyị na-ebubata na Thailand, ya mere anyị ga-aghọta ihe kpatara Genotropin ka mma?
Kwenye na oke elu nke hormone nke mmadụ
Site na onye na - emepụta ihe na - emepụta ọgwụ na ọgwụ na - emepụta Pfizer - na - atụkwasị obi na ogo elu nke ngwaahịa hormone
Enweghị ike iji ogige HGH Genotropin
Mmetụta nke ojiji nke ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkọ na-ebuwanye ibu na njem na-achọ nlebara anya pụrụ iche. Nkwadebe maka ịṅụ ọgwụ hormone na-ewe naanị minit 2, ndị na-emepụta ihe na genotropin na-elekọta ihe dị mfe ma dị mma nke ịgwakọta ngwakọta ọgwụgwọ na ngwakọta hormone nke na-eto eto, na-agbanwezi usoro ọgwụgwọ ahụ kpọmkwem.
A na-echepụta ngwaọrụ nke aka ahụ na obere ihe n'ime ugbua nwere ihe ngwọta maka ịgwakọta na uto hormone - ị nwere ike jikọta ya site na ịgbanọ klọpụ ahụ site n'ọnọdụ abc iji dozie usoro ọgwụgwọ dịka ọmụmaatụ 0.6 ma ọ bụ 0.9 ml pịa bọtịnụ - pịa na ị meela!
Banyere ịgwakọta, lee isiokwu a
A na-eji mkpụmkpụ hormone eme ihe na okpu nchebe, mgbe ejikọsịrị hormone nke na-eto eto, a ga-echekwa ya na okpomọkụ nke 8-12 ogo, ị ga-ewepu agịga ahụ, tinyekwa mkpuchi nche ma tinye ya na friji
Soro HGH na ụgbọ elu ma na ọdụ ụgbọ elu
Ụfọdụ ndị ahịa si Singapore na-ahọrọ iji hormone na-eto eto si Thailand gaa Singapore ma ọ bụ njem, ya bụ iji ụgbọelu. N'adịghị ka ọnụ ahịa dị njọ nke China, ọ dịghị mkpa ka ị na-ebu ihe enyemaka zuru oke - syringes, ampoules, ite ndị ọzọ nwere ike ime ka enyo na omenala ma ọ bụ mkpa ịnyekwu akwụkwọ.
Genotropin a pen ị na-etinye na akpa ma ọ bụ aka akpa ma chefuo banyere ya, gbakwunyere
Genotropin anaghị ewere ohere dị ukwuu ma ghara inwe iko dị nro na-amụba ihe ize ndụ nke mmebi
Kedu ihe bụ HGH (Somatropin)?
Mkpụrụ hormone na-eto eto ma ọ bụ somatotropin bụ otu n'ime isi hormonụ mmadụ si n'akụkụ ihu nke pituitary. Somatotropin na-akwalite mmekorita anabolic, na-eme ka njikọ nke mmepụta mkpụrụ ndụ ọhụrụ mepụta ngwa ngwa, na-emetụta mbelata nke abụba subcutaneous, na-eme ka ogo oke ahụ dị arọ. Nwere mmetụta ọgwụgwọ mgbe ọnyá na ọkụ nke akpụkpọ ahụ, ọgwụgwọ nke ọrịa ọkpụkpụ.
Ihe dị mkpa maka ma ndị inyom ma ndị nwoke, na-eme dịka onye na-arụ ọrụ na-eme agadi, na-eme ka ntinye aka na ndozi nke ochie ma ọ bụ mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ na ndị ọhụrụ. N'ezie, hormone nke na-eto eto bụ ọgwụ ọhụrụ nke ọdịnihu, nke bụ isi ihe kpatara mmachibido iwu nke ire ere homer.
Otutu ugbochi nke oge a na oru nyocha banyere mmepe nke ọgwụ ndi ozo na-adabere na hormone na-eto eto nye ndi obese, ọgwụ maka ahu aru na dika "isi iyi nke ntorobia" dika ogwu ogwu.
Jiri HGH na egwuregwu
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu si Singapore jiri hormone nke na-eto eto iji weghachite mmerụ ahụ na mmerụ ahụ metụtara mmerụ dị egwu dị ka ịgba egwu, ọgụ na-enweghị iwu, basketball, football na egwuregwu ndị ọzọ na-emekarị ndị na-eme egwuregwu na-enwe mmerụ, sprains na tendons. HGH nwere ike inyere gị aka ịgbake ngwa ngwa.
Ọgwụgwọ ikpere na enyemaka nke hormone growth
Ndị ọrụ egwuregwu na njedebe nke ọrụ egwuregwu nwere ahụ mgbu na nkwonkwo, ikpere na azụ. Ọgwụgwọ nkwonkwo na hormone na-eto eto na-egosi nsonaazụ dị mma - dịka ọmụmaatụ, ndị ọrịa nwere ahụ ikpere ma ọ bụ azụ
ihe ngbu mgbe izu 2 malite ịmalite ịmalite ọgwụ mgbochi ịmalite amalite ịhụ ọkwa dị mma, mgbe ọnwa 1 gasịrị na mgbu na-agabiga kpamkpam ma ndị ọrịa nwere ike ịnọgide na-enwe ndụ na ike zuru ike na egwuregwu egwu egwu n'enweghị nsogbu ọ bụla
HGH na Bodybuilding
O nwere ike ịbụ na ihe kachasị ewu ewu nke hormone nke na-eto eto anọwo na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ndị ọkachamara na-eme egwuregwu na ndị na-amalite na mgbatị ahụ n'ihi nkwụsị nke ibu arọ, abụba dị ala na ịba ụba nke ahụ.
Mkpụrụ hormone nke na-eto eto nwere mmetụta nke anabolic siri ike, ma n'adịghị ka ndị ọzọ steroid, ọ bụ ihe zuru oke iji rụọ ọrụ n'ihi na o nwere ụdị hormone yiri nke ahụ na-eme ka ọkpụkpụ pituitary gland.
Onye ọrịa ahụ na-akwụ ụgwọ maka mmepụta nke mkpụrụ osisi hormone, nke na-adabere mgbe 25 gasịrị ma nọgide na-adajụ mgbe niile ruo mgbe agadi mmadụ dị nká. Eleghị anya nke ahụ bụ ihe mere ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eji 25 mee ihe n'ụzọ dị mfe ga-enweta nzụpụta dị mma n 'ahụ.
Kedu ka hormone nke na-eto eto na-esi eme ọganihu?
Mmiri hormone na-arụ ọrụ na mgbatị ahụ na ike na-eji ihe oriri na-edozi ahụ nwere nnukwu protein na amino acid - ọtụtụ ugboro na-agba ọsọ ka e guzobere mkpụrụ ndụ ọhụrụ, ụbụrụ muscle, nnọchi nke sel ochie na ndị ọhụrụ - ọ bụ hormone nke na-eto eto bụ brik kachasị mkpa na-ewu ahụ gị
Ọgwụgwọ oke ibu na ọnwụ
Ihe kachasị mkpa bụ mmekọrịta nke oké ibu na mmadụ mgbe afọ 25 gasịrị - ahụ na-amalite ịchịkọta abụba n'ime mmiri, afọ na ụkwụ - ọ dị nnọọ mfe na hormone na-emetụta metabolism nke ahụ, mgbe 25 afọ uto nke uto ahu nke na-eto eto na-ebelata mgbe ufodu karia mmadu bu ogo nke ndu onwe onye na aru
Ngwọta nke nwoke ahụ meworo agadi na-eto eto na Singapore
O di nwute na ahu anyi nwere ihe ndi ozo na ihe ndi o bula di ndu ma ha adighi ndu n'elu uwa ka ha gbanwee na nká. Mmadụ na-etolite n'ihi na ọ na-eyi ya na nsị nke anụ ahụ, ụbụrụ, nkwụghachi azụ nke mkpụrụ ndụ ọhụrụ iji dochie ndị agadi na onye ahụ na-amalite ịka nká ma daa mbà.
Mkpụrụ hormone nke na-emepụta emepe na-akwalite ncha na ụlọ nke sel ọhụrụ, anụ ahụ na ogige. Mgbe ọnwa 1 gasịrị, ị na-achọpụta na ọganihu dị na ntutu, akpụkpọ anụ, mbọ. sụgharịa.
Ee, ọ bụ n'ihi injections nke hormone growth na organism na-amalite ịmecha zuru ụwa ọnụ, dochie sel ochie na ndị ọhụrụ na onye na-ihe kacha mkpa - ntorobịa, ịma mma na ahụ ike
Mmetụta ndị na-akpata Ọganihu Ụmụ Mmadụ Hormone
Umu nke na-eto eto bu 191 amino acids dika udi ogwu nke na-emeputa site na pituitary gland. Mkpụrụ hormone nke na-eto eto enweghi mmetụta ọ bụla ma dị mma maka ma okenye ma ụmụaka nwere ụkọ hormone
Ụdị nke HGH
A na-ekeji ikuku hormone nke na-eto eto na mpaghara 3:
- HGH na-eme ihe maka ozu ahụ
- Ọgwụgwọ ibu na oke abụba
- Ọgwụgwọ ịka nká
Atụmatụ oge ochie nke usoro hormone na-eto eto bụ
3 IU kwa ụtụtụ ma ọ bụ tupu ị lakpuo ụra
n'ihi na ndị mmadụ karịrị afọ 30 dị arọ ruo 100 n'arọ
ma ọ bụ 4 IU maka ndị mmadụ n'elu 100-120 n'arọ
Maka nkọwa zuru ezu, biko kpọtụrụ onye na-ahụ maka ntanetị anyị
HGH ego na Singapore na ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ọgwụ ahịa anyị na-eto eto na Thailand na-enye anyị ndidi ala jiri ya tụnyere mba ndị ọzọ dịka Australia, US ma ọ bụ Canada. Idebe iwu gị ka ị nweta nkwa zuru oke maka ibute hormone n'ọnụ ụzọ ụlọ gị. Nye ndị ahịa anyị anyị dịkwa njikere ịnye usoro ịkwụ ụgwọ dị mfe site na ịdebanye aha na ọnụego ọnwa
Ndenye ọnwa maka uto eto na Singapore
Ma ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ? Ọ bụghị ndị ahịa niile dị njikere ịkwụ ụgwọ 10-12 hormone na-ebuwanye ibu n'otu oge, n'agbanyeghị na ịzụta ọtụtụ dị ọtụtụ karịa nchịkọta oge ọ bụla.
Anyị dị njikere maka ndị ahịa anyị site na singapore iji mee ka ọnụahịa zuru ezu maka ọgwụgwọ hormone growth (ọnwa 6), nke ndị a na-edebanye aha ha nwere ike ịkwụ ụgwọ hormone kwa ọnwa, ọ na-adaba ma dị mma iji nweta hormone dị mkpa kwa ọnwa.
Dịka ọmụmaatụ, onye ahịa chọrọ 2 nchịkọta hormone n'afọ - ọ na-akwụ 2 ngwugwu na ọnụahịa ego, na-enweta kwa ọnwa ya ma nye ya iwu ọ ga-esote ọnwa ma na-akwụ ụgwọ 2 na-esote nke hormone. Atụmatụ a bara uru maka anyị, ndị ahịa anyị ma mepụta mmekọrịta dị mkpa dị n'etiti anyị na ndị ọrịa.